मनोरञ्जन Archives - Onlinesnepal.com
October 17, 2020 userLeaveaComment on सैफसँग विवाह गर्न करीनाले दुई पटक गरेकी थिइन् अस्वीकार
एजेन्सी – बलिउडका अभिनेता सैफ अली खान र अभिनेत्री करीना कपूरले विवाह गरेको ८ वर्ष भइसकेको छ । उनीहरु आफ्नो वैवाहिक जीवनमा निकै खुशी छन् । तर, विवाह गर्नका लागि करीनाले सैफको प्रपोज दुईपटक अस्वीकार गरेकी थिइन् । करीना उनका पूर्वप्रेमी शाहिद कपूरसँग थुप्रै वर्ष सम्बन्धमा रहेर छुट्टिएकी थिइन् । शाहिदसँग ब्रेकअप भएपछि करीनालाई सैफले […]
September 28, 2020 userLeaveaComment on दाजुभाईको दिदीबहिनीसँग विवाह हुने यी जनजाति
भाई र दिदीको नाता पवित्र मानिन्छ । तर आज हामी तपाईहरुलाई यस्तो रीतिरिवाजको बारेमा जानकारी दिन चाहान्छौ, जुन कुरा सुनेर आश्चर्य मान्नु हुन्छ । भारतमा एक यस्तो परम्परा छ जहाँ भाई र बहिनी एक आपसमा विवाह गर्छन् । छत्तीसगढको धुरुवा जनजातिमा रगतको नाता भित्रै विवाह गर्छन् । धुरुवा जनजातिमा मानिसहरु दिदी बहिनीको छोरीसँग आफ्नो छोराको […]
September 26, 2020 userLeaveaComment on अन्डरवेयर लगाउँदाका यस्ता छन् ५ अविश्वनिय फाइदाहरु !
भित्री लूगा (पेन्टी) नलगाउँदा कि त निकै रमाइलोको पात्र बनिन्छ या अनावश्यक जोखिम उठाउनु पर्ने हुनसक्छ । विशेष रुपमा महिलाहरुले पेन्टी लगाउने गर्छन् । अन्यथा थुप्रै समस्याहरु झेल्नु पर्ने हुनसक्छ । पछिल्लो समय हलिउड बलिउण्डमा नायिकाहरुले भूलेर वा चर्चा कमाउनकै लागि पेन्टी नलगाई सार्वजनिक कार्यक्रममा गए । किन लगाइन्छ त अण्डरवेयर फील गुड: केही महिला […]
मा’पसेमा पक्राउ परेका एक जोडीले पुलिसकै कारमा अ’श्लि’ल हर्कत गरेपछि…
September 5, 2020 userLeaveaComment on मा’पसेमा पक्राउ परेका एक जोडीले पुलिसकै कारमा अ’श्लि’ल हर्कत गरेपछि…
एजेन्सी। प्रहरीले नियमित जाँचका क्रममा एक दम्पतिको सवारी साधनलाई बाटोमा रोक्छ । प्रारम्भिक अवस्थामै उनीहरुले मा’द’क प’दा’र्थ से’वन गरेको थाहा हुन्छ । प्रहरीलाई उनीहरुको गतिबिधि ठीक लाग्दैन र आफ्नो कारबाट उत्रेर प्रहरीको भ्यानमा बस्न भन्छ । उनीहरु प्रहरीको भ्यानमा बस्छन् पनि तर उनीहरु त्यही रति रा’गमा लि’प्त हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा प्रहरीको प्रतिक्रिया के होला? […]
गम्भीर अप’राधको आरोपमा अभिनेत्री रागिनी पक्राउ
September 5, 2020 September 5, 2020 userLeaveaComment on गम्भीर अप’राधको आरोपमा अभिनेत्री रागिनी पक्राउ
बैंगलोर। ला’गूऔ’षधको केसमा केन्द्रीय अप’राध शाखाले दक्षिण भारतीय अभिनेत्री रागिनी द्विवेदीलाई पक्राउ गरेको छ । यसअघि सीसीबीले उाको घरमा छापा मा’रेको थियो । पुलिस सूत्रका अनुसार पुलिसको एक टिम बिहान ६ बजे रागिनीको घर पुगेको थियो । सीसीबीले बुधबार उनलाई नोटिस जारी गरेर उपस्थित हुन निर्देशन दिएको थियो तर रागिनीले वकिलको एक टिम पठाएर सोमबारसम्म […]
शिल्पाले निर्मातामाथि लगाइन् यस्ताे आरोप
September 3, 2020 userLeaveaComment on शिल्पाले निर्मातामाथि लगाइन् यस्ताे आरोप
मुम्बई । सिने आर्टिस्ट एसोसिएसनद्वारा दुई वर्षको प्रतिबन्ध फुकुवापछि बलिउड अभिनेत्री शिल्पा सिन्देको कमब्याक भएको छ। शिल्पा कमेडी सो ‘ग्याङ्स अफ फिल्मिस्तान’ बाट टेलिभिजन कार्यक्रममा देखिन थालेकी हुन्। यो सोमा सुनिल ग्रोवर, अली असगर र सिद्धार्थ सागर पनि देखिँदै छन्। तर सो सुरु हुनुभन्दा अगावै शिल्पाले ‘ग्याङ्स अफ फिल्मिस्तान’ का निर्मातामाथि शोषणको आरोप लगाएकी छन्। […]
सलमानको ‘फी’ ४ सय ५० करोड !
September 3, 2020 September 3, 2020 userLeaveaComment on सलमानको ‘फी’ ४ सय ५० करोड !
एजेन्सी । अभिनेता सलमान खान बिग बॉसको १४ सीजन पनि हाेस्ट गर्नकाे लागि तयार छन्। भारतको सबैभन्दा ठूलो रियलिटी शो अक्टुबरमा सुरु हुनेछ र धेरै प्रतियोगीहरू एक घरमा बन्द हुनेछन्। तर सामान्यतया सलमान खानको शुल्क शो सुरु हुनुभन्दा अघि मुख्य समाचारमा बनेकाे छ। सलमान खानको बिग बोस शुल्कले हरेक मौसममा सबैलाई छक्क पार्छ। रिपोर्टका अनुसार […]
भारतमा पब्जीसहित ११८ वटा चिनियाँ मोबाइल एप्समाथि प्रति’बन्ध
September 3, 2020 userLeaveaComment on भारतमा पब्जीसहित ११८ वटा चिनियाँ मोबाइल एप्समाथि प्रति’बन्ध
एजेन्सी । भारत सरकारले चीनले विकास गरेका पब्जीसहित ११८ वटा मोबाइल एप्सलाई प्रति’बन्ध लगाएको छ । बुधबार भारतको इलेक्ट्रोनिक्स तथा सूचना मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी चिनियाँ एप्सहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाएको जानकारी दिएको हो । विज्ञप्तिमा ती एप्सहरुको प्रयोगले भारतको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डता र सुरक्षामा समेत खतरा पैदा भएको जनाइएको छ । मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ- […]
महिना’वारीकाे बेला याे’नी दुखेपछि चिकित्सकले पत्ता लगाए २ वटा याे’नी(फाेटाेसहित)
September 2, 2020 September 2, 2020 userLeaveaComment on महिना’वारीकाे बेला याे’नी दुखेपछि चिकित्सकले पत्ता लगाए २ वटा याे’नी(फाेटाेसहित)
एजेन्सी । एक किशोरीको दुईवटा यो’नी भेटिएको छ । बेलायत गिलिङघाम केन्टस्थित १९ वर्षीया किशोरी मोली रोज टेलरमा महिना’वारी समस्या थियो । महिना’वारीमा समस्या भएपछि उनी अस्पताल गएकी थिइन् । डाक्टरले उपचारको क्रममा मोलीको दुईवटा यो’नी भएको पत्ता लगाएको हो । ९ वर्षको हुँदादेखि उनले महिना’वारी निकै पीडा’दायी भएको बताउँदै आएकी थिइन् । चिकित्सकले भने […]